Suuriya…Duqeymo aan dhamaad lahayn iyo Barakac Joogta ah! – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Suuriya…Duqeymo aan dhamaad lahayn iyo Barakac Joogta ah!
Last updated Jan 23, 2020 469 0
Wuqooyiga Suuriya waxaa ka taagan xaalad cakiran oo dhanka banii aadamnimada ah, kadib markii ay sii xoogeysteen duqeymaha aan loo meel dayin ee diyaaradaha Nidaamka iyo kuwa Ruushku ku garaacayaan deegaannada ay dadka shacabka ah ku noolyihiin.
Maalmihii lasoo dhaafay, waxaa dhacayay duqeymo aan kala joogsi lahayn, oo si cad u beegsanaya xaafadaha ay shacabka ku noolyihiin iyo goobaha isku imaatinnada ah sida suuqyada, masaajidda iyo goobaha waxbarashada.
Duqeymaha ugu xoogan waxay ka dhacayaan deegaannada baaadiyaha ee gobollada Idlib iyo Xalab oo dhaca wuqooyiga Suuriya, waxaana isku bed bedelaya diyaaradaha Ruushka iyo kuwa nidaamka Bashaar Al-Asad.
Dadka ayaa waxaa lagu duqeynayaa gantaallo halis ah oo ay mamnuuc tahay in loo adeegsado dagaallada, iskaba daa in lagu gumaado dad shacab ehe, waxaana sii kordhaya khasaaraha ka dhalanaya duqeymahaas.
Sida ay xaqiijinayaan ilaha caafimaadka iyo kooxaha badbaadada, saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay inkabadan 30 ruux ayaa ku dhintay duqeymaha ay geysanayaan diyaaradaha Ruushka iyo kuwa Nidaamka Bashaar, waxaana dadka dhintay u badan dumar iyo caruur waxba galabsan.
Diyaaradaha ayaa dadka uga daba tagaya goobihii ay u barakaceen ee baadiyaha, waxaana lasoo warinayaa in kaamamka qoxootiga iyo beeraha ay kamid yihiin meelaha sida ba’an loo duqeynayo.
Marka laga soo tago dadka dhintay, waxaa jira dad aad u badan oo ay soo gaareen dhaawacyo kala duwan, kuwaas oo xaaladooda lala tacaalayo, inkastoo isbitaallada ay laftoodu xaaladoodu liidato oo aan laga heleynin dawo waxtar ah iyo dhakhaatiir aqoon durugsan leh.
Duqeymahan ayaa kusoo aadaya, iyadoo la sheegayo in Ruushka iyo Turkigu ay ku dhawaaqeen xabad joojin, waxaana muuqata in dhanka Nidaamku aanu laazimin xabad joojintaas oo uu hadda geysanayo gumaad wuxuushnimo ah.